လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ၂၀၁၈ ရဲ့ ဆုရဇာတ်ကားကောင်း များ - For her Myanmar
ပိတ်ရက်လည်း ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ မကြည့်ရသေးတဲ့ကားလေးတွေ ဒေါင်းထားဦးမှ 😛
၂၀၁၈ကုန်လို့ ၂၀၁၉ထဲရောက်လာတော့မယ်နော်။ အဲ့တော့ ၂၀၁၈ရဲ့ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်တွေကိုကော ကြည့်ပြီးကြပြီလား? တကယ်တော့ ၂၀၁၈ ဟာ စုံလင်လှတဲ့ ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားများစွာနဲ့ ကျေနပ်စရာ ဇာတ်ကားကောင်းတွေ ထွက်ခဲ့တဲ့နှစ်လို့ ပြောရမှာပါ။ ၂၀၁၈ အော်စကာဆုပေးပွဲနဲ့ ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုပေးပွဲမှာ ပရိသတ်အများစု မျှော်မှန်းထားတဲ့၊ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကပဲ ဆုရခဲ့တာဖြစ်လေတော့ အားရကျေနပ်စရာနှစ်ပါပဲ။
လက်မလွတ်တမ်း ကြည့်သင့်တဲ့ ဆုရ ဇာတ်ကားကောင်း တချို့ကတော့..
(1)The Shape of Water
IMDB 7.4 တောင်ရခဲ့တဲ့ The Shape of Water ကတော့ ဆုပေးပွဲတွေမှာ ဆုအများဆုံး ရခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ။ The Shape of Water ဟာ ကြည့်ရှုသူ ရင်ကိုရိုက်ခတ်နိုင်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လို့ပြောရင်လည်း မမှားဘူးပေါ့နော်။ ဇာတ်လမ်းကို ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဘာလ်တီမောမှာ နောက်ခံထားပြီး ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြောရရင်တော့ …
နားမကြားတဲ့ အထီးကျန် အမျိုးသမီးဖြစ်သူ Elisa ဟာ အစိုးရရဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုမှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကိုင် သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ရက်မှာတော့ Elisa ဟာ အစိုးရက လုံးဝလူသိမခံလိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကို တွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လူလား၊ ငါးလား လို့တောင် ပြောရခက်တဲ့ ဒဏ္ဍာရီလာ ရေနေသတ္တဝါတစ်ကောင်ဟာ သူ(မ) အလုပ်လုပ်တဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ ရှိနေတာ၊ အစိုးရရဲ့ ရက်ရက်စက်စက် စမ်းသပ်ခံနေရတာကို သိသွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ဒဏ္ဍရီလာသတ္တဝါနဲ့ Elisa တို့ကြားမှာ သံယောဇဉ် တဖြည်းဖြည်းတွယ်ငြိလာပြီး ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့အခါ၊ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်မှာလည်း ဒီသတ္တဝါရဲ့ အဆုံးသတ် ကံကြမ္မာဟာ ရက်စက်တဲ့ အစိုးရအာဏာပိုင်တွေ လက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့အခါ…မတူညီတဲ့ ကမ္ဘာက ချစ်သူနှစ်ယောက်ဟာ အကြပ်အတည်းထဲ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ဟာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး ဆန်းသစ်တဲ့ဇာတ်အိမ်နဲ့အတူ ကြည့်ရှုသူကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ ရေအောက် ရိုက်ချက်တွေ၊ သေသပ်တဲ့ ကွန်ပျူတာ အထူးပြုလုပ်ချက် တွေကြောင့် အကယ်ဒမီ အများဆုံး သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
(2) The Lady Bird
The Lady Bird ကတော့ အချစ်ဟာသဇာတ်ကား အမျိူးအစားဖြစ်ပြီး IMDB 7.5 အထိ ရထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Marion ဟာ ယောကျာ်းဖြစ်သူ အလုပ်ပြုတ်သွားတာကြောင့် မနားမနေ အလုပ်လုပ်ပြီး တစ်မိသားစုလုံးကို ရှာကျွေးနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုဝင်ငွေရှာရတဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးသူ(မ)ဟာ တစ်ဖက်မှာတော့ သူ(မ)ရဲ့ သမီးလေး အပေါ် မိခင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာ သိပ်အဆင်မပြေလှပါဘူး။
သမီးလေးဟာ Marion လိုပဲ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်ပေမဲ့ အရွယ်ရောက်တဲ့ ငှယ်မဒီလေးလို အဝေးကို ပျံသန်းကြည့်ချင်တဲ့၊ စွန့်စားချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ အမြဲပြဿနာ ဖြစ်ရသူပါ။
ဒါကြောင့် Lady Bird ဟာ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ တဇွတ်တိုး လုပ်တတ်လာတဲ့၊ ပုန်ကန်တတ်လာတဲ့ သားသမီးနဲ့ မိဘဖြစ်သူကြားမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ကတောက်ကဆ ဆက်ဆံရေးအကြောင်း သဘာဝကျကျ၊ လက်တွေ့ကျကျ ရိုက်ကူးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘနဲ့ သားသမီးဆက်ဆံရေးကို ပိုမို နားလည်နိုင်စေမယ့် Lady Bird ဟာ မိဘတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါလေးကတော့ အကောင်းဆုံးအန်နီမေးရှင်းရုပ်ရှင်ဆု၊ အကောင်းဆုံးဇာတ်ဝင်တေးဆု နဲ့ အခြားဆုပေါင်းများစွာရခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အန်နီမေးရှင်း ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်အိမ်အကျဉ်းကတော့ မက်ဆီကန် ကလေးငယ်မီဂေါဟာ အဆိုဝါသနာပါတဲ့ ကလေးပါ။ ဒါပေမဲ့ ထူးဆန်းတာကတော့ မီဂေါရဲ့ အဘွားကစလို့ သူ့မိဘတွေအထိ သီချင်းဂီတကို ခါးခါးသီးသီး မုန်းတီးပြီး လုံးဝမဆိုရ၊ နားမထောင်ရလို့ ပိတ်ပင်ထားကြပါတယ်။ ဒီလို ဝါသနာနဲ့ အိမ်မက်ကို ရိုက်ချိုးခံရတာကြောင့် ကြေကွဲနေတဲ့ မီဂေါဟာ အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် မတော်တဆ ဝိဉာဉ်တွေနေတဲ့ တမလွန်ကမ္ဘာကို ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
တမလွန်ကမ္ဘာမှာ သေဆုံးသွားတဲ့ မီဂေါတို့ ဘိုးဘေးတွေ အားလုံးကို တွေ့ရသလို အရမ်းပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ဟက်တာ ဆိုတဲ့ ဂီတကျွမ်းကျင်သူနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဝိဉာဉ်မြို့တော်ကြီးမှာ မီဂေါတစ်ယောက် သူဖြစ်ချင်တဲ့ အဆိုတော်အိမ်မက်ကို အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားရင်း သူ့မိသားစုရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်နဲ့ ပျောက်ကွယ်နေခဲ့တဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတဲ့အခါ…..မီဂေါတစ်ယောက်လည်း ဝိဉာဉ်လောကမှာ ဆက်နေရင် ထာဝရပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရတဲ့အခါ…
ကာတွန်းကားဆိုပေမဲ့ တကယ့်မက်ဆီကန်ရိုးရာအလှတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ထည့်သွင်းတင်ဆက်ထားတာမို့ ကြည့်ရတာ အတော်လေး အရသာရှိပါတယ်။ ကာတွန်းကားဆိုလို့ အထင်မသေးနဲ့။ ကလေးတင်မဟုတ်ဘူး အက်ဒ်မင်တို့ လူကြီးတွေပါ မျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းရတဲ့အထိ အပီအပြင် ခံစားခဲ့ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားပါနော်။
ဒါကတော့ သမိုင်းအမှန်ကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖို/ ဒရမ်မာ ဇာတ်ကားပါ။ IMDB 7.9 အထိ ရထားတဲ့ Dunkirk ဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မဟာမိတ်တပ်သားတွေကို စွန့်စွန့်စားစားကယ်ထုတ်တဲ့ စစ်ဆင်ရေး အကြောင်းကို ရိုက်ထားတာပါ။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ၁၉၄၀ မှာ နာဇီဂျာမနီတွေက ပြင်သစ်ကိုရုတ်တရက် ကျူးကျော်လိုက်တာကြောင့် မဟာမိတ် တပ်သားလေးသိန်းဟာ Dunkirk ဆိုတဲ့ ရွာလေးရဲ့ ကမ်းခြေနဲ့ သဘောင်္ဆိပ်ကမ်းတွေမှာ ပုန်းနေခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလို ပုန်းနေရပြီး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ လမ်းစ သိပ်မရှိတဲ့ မဟာမိတ်တပ်သားတွေကို နောက်ဆုံးမှာ အောင်အောင်မြင်မြင် ခက်ခက်ခဲခဲ ဘယ်လို ကယ်ထုတ်သွားကြလဲဆိုတာ ရှုစားကြပါလို့….
စစ်ကားတွေ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ အတော်လေး အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းပါပဲ။ အဲ့ရုပ်ရှင်မှာ အက်ဒ်မင်အကြိုက်ဆုံးစာသားကတော့ “လူလေးသိန်းဟာ အိမ်မပြန်နိုင်တော့တဲ့အခါ အိမ်ဟာ သူတို့ဆီရောက်လာခဲ့ပါတယ်”တဲ့။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာလည်း အကယ်ဒမီဆုများစွာ သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။
(5) Call me by your name
ဒါကတော့ IMDB 7.9 အထိရထားတဲ့ LGBT ဇာတ်ကားလေး ဖြစ်ပြီး မူရင်းဝတ္ထုကော ရုပ်ရှင်အဖြစ် ပြန်အသက်သွင်းတဲ့အခါမှာကော အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။
အချိန်ကာလကတော့ ၁၉၈၃ ရဲ့ နွေရာသီတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေး Elio ဟာ အီတီလီက Lombardy ဒေသမှာ သူ့မိသားစုနဲ့ အပန်းဖြေနေပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ Elio တို့ အဖေဆီမှာ အလုပ်သင်လုပ်ဖို့ ဆိုပြီး Oliver ဆိုတဲ့ Ph.D ကျောင်းသားတစ်ယောက် ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ Oliver နဲ့ Elio တို့ရဲ့ တွေ့ဆုံမှု၊ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ သံယောဇဉ်ဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့ သာမန်လူတွေလက်ခံဖို့ ခက်ခဲတဲ့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒအာသီသကို နှိုးထလာစေခဲ့ပြီး Elio နဲ့ Oliver တို့ရဲ့ဘဝကို လုံးဝပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။
သိပ်ကို ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ အီတလီရဲ့ အလှတွေကို နောက်ခံထားပြီး အဓိကမင်းသားနှစ်ယောက်ရဲ့ ပြင်းပြတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ကြည့်ရှုသူ ရင်ထဲ နွေးထွေးသွားစေမယ့်၊ ပိုပြီး လူသားဆန်လာတတ်စေမယ့်၊ အချစ်ကို အချစ်လို့သာ အပြစ်ကင်းကင်း မြင်တတ်လာစေမယ့် Gay ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Related Article >>> ‘မသိဘူး ရိုမယ်’ ဆိုတဲ့ယောင်းတို့အတွက် အရိုဆုံးရုပ်ရှင်ကား (၂) ကား
(6)Three Billboards outside Ebbing, Missouri
IMDB 8.2 အထိ ရထားပြီး မှုခင်းရုပ်ရှင်/ဒရာမာ အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်အိမ်အကျဉ်းကတော့ Mildred Hayes ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ မုဒိန်းကျင့်ပြီး သတ်ခံလိုက်ရတဲ့ သူ(မ) သမီးအတွက် တရားမျှတမှုကို ရှာဖွေဖို့ ကြိုးစားနေသူပါ။ ဒါပေမဲ့ အားမစိုက်ထုတ်လိုတဲ့ Ebbing မြို့က ရဲတွေနဲ့ အာဏာပိုင်တွေကတော့ ဒီအမှုကို လျစ်လျူရှုနေခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ပဲလား ဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ မိခင်သောကကို ကိုယ်ချင်းမစာတဲ့ မြို့ခံပြည်သူတွေကလည်း ဒီအမှုမှာ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ တစ်သားတည်းရပ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ(မ)ဟာ လွယ်လွယ်နဲ့ လက်လျှော့တတ်သူ မဟုတ်ပါဘူး။
(၇)လလုံးလုံး တရားခံကို ဖမ်းဆီးမှု မလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ သမီးဖြစ်သူအတွက် အမှန်တရားနဲ့ တရားမျှတမှုကို ရဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ Mildred Hayes တစ်ယောက် သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ အပီအပြင် ကြိုးစားလာခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒါတွေကတော့ အကယ်ဒမီဆုနဲ့ ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုတွေ သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ရဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းပါပဲ။ ဒီထဲမှာ ယောင်းတိုဘယ်ကားလေးတွေ ကြည့်ပြီးပြီလဲ?
ပိတျရကျလညျး ရောကျတော့မယျဆိုတော့ မကွညျ့ရသေးတဲ့ကားလေးတှေ ဒေါငျးထားဦးမှ 😛
၂၀၁၈ကုနျလို့ ၂၀၁၉ထဲရောကျလာတော့မယျနျော။ အဲ့တော့ ၂၀၁၈ရဲ့ အကောငျးဆုံး ရုပျရှငျတှကေိုကော ကွညျ့ပွီးကွပွီလား? တကယျတော့ ၂၀၁၈ ဟာ စုံလငျလှတဲ့ ရုပျရှငျအမြိုးအစားမြားစှာနဲ့ ကနြေပျစရာ ဇာတျကားကောငျးတှေ ထှကျခဲ့တဲ့နှဈလို့ ပွောရမှာပါ။ ၂၀၁၈ အျောစကာဆုပေးပှဲနဲ့ ရှကေမ်ဘာလုံးဆုပေးပှဲမှာ ပရိသတျအမြားစု မြှျောမှနျးထားတဲ့၊ ရသငျ့ရထိုကျတဲ့ ဇာတျလမျးတှကေပဲ ဆုရခဲ့တာဖွဈလတေော့ အားရကနြေပျစရာနှဈပါပဲ။
လကျမလှတျတမျး ကွညျ့သငျ့တဲ့ ဆုရ ဇာတျကားကောငျး တခြို့ကတော့..
IMDB 7.4 တောငျရခဲ့တဲ့ The Shape of Water ကတော့ ဆုပေးပှဲတှမှော ဆုအမြားဆုံး ရခဲ့တဲ့ရုပျရှငျဖွဈပါတယျ။ ။ The Shape of Water ဟာ ကွညျ့ရှုသူ ရငျကိုရိုကျခတျနိုငျတဲ့ အခဈြဇာတျလမျးတဈပုဒျလို့ပွောရငျလညျး မမှားဘူးပေါ့နျော။ ဇာတျလမျးကို ၁၉၆၂ ခုနှဈ ဘာလျတီမောမှာ နောကျခံထားပွီး ဇာတျလမျးအကဉျြးကိုပွောရရငျတော့ …
နားမကွားတဲ့ အထီးကနျြ အမြိုးသမီးဖွဈသူ Elisa ဟာ အစိုးရရဲ့ ဓာတျခှဲခနျးတဈခုမှာ သနျ့ရှငျးရေးလုပျကိုငျ သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈရကျမှာတော့ Elisa ဟာ အစိုးရက လုံးဝလူသိမခံလိုတဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြတဈခုကို တှသှေ့ားခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ လူလား၊ ငါးလား လို့တောငျ ပွောရခကျတဲ့ ဒဏ်ဍာရီလာ ရနေသေတ်တဝါတဈကောငျဟာ သူ(မ) အလုပျလုပျတဲ့ ဓာတျခှဲခနျးထဲမှာ ရှိနတော၊ အစိုးရရဲ့ ရကျရကျစကျစကျ စမျးသပျခံနရေတာကို သိသှားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီ ဒဏ်ဍရီလာသတ်တဝါနဲ့ Elisa တို့ကွားမှာ သံယောဇဉျ တဖွညျးဖွညျးတှယျငွိလာပွီး ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှေ ပေါကျဖှားလာတဲ့အခါ၊ ဒါပမေဲ့ တဈဖကျမှာလညျး ဒီသတ်တဝါရဲ့ အဆုံးသတျ ကံကွမ်မာဟာ ရကျစကျတဲ့ အစိုးရအာဏာပိုငျတှေ လကျထဲမှာ ရှိနတေဲ့အခါ…မတူညီတဲ့ ကမ်ဘာက ခဈြသူနှဈယောကျဟာ အကွပျအတညျးထဲ ရောကျလာခဲ့ပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျဟာ စိတျဝငျစားစရာကောငျးပွီး ဆနျးသဈတဲ့ဇာတျအိမျနဲ့အတူ ကွညျ့ရှုသူကို ဖမျးစားနိုငျခဲ့တဲ့ သရုပျဆောငျခကျြတှေ၊ ရအေောကျ ရိုကျခကျြတှေ၊ သသေပျတဲ့ ကှနျပြူတာ အထူးပွုလုပျခကျြ တှကွေောငျ့ အကယျဒမီ အမြားဆုံး သိမျးပိုကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
The Lady Bird ကတော့ အခဈြဟာသဇာတျကား အမြိူးအစားဖွဈပွီး IMDB 7.5 အထိ ရထားပါတယျ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ Marion ဟာ ယောကျြားဖွဈသူ အလုပျပွုတျသှားတာကွောငျ့ မနားမနေ အလုပျလုပျပွီး တဈမိသားစုလုံးကို ရှာကြှေးနသေူ ဖွဈပါတယျ။ မိသားစုဝငျငှရှောရတဲ့ အိမျထောငျဦးစီးသူ(မ)ဟာ တဈဖကျမှာတော့ သူ(မ)ရဲ့ သမီးလေး အပျေါ မိခငျတာဝနျထမျးဆောငျရတာ သိပျအဆငျမပွလှေပါဘူး။
သမီးလေးဟာ Marion လိုပဲ ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ မိနျးကလေးဖွဈပမေဲ့ အရှယျရောကျတဲ့ ငှယျမဒီလေးလို အဝေးကို ပြံသနျးကွညျ့ခငျြတဲ့၊ စှနျ့စားခငျြတဲ့ စိတျဓာတျကွောငျ့ မိခငျဖွဈသူနဲ့ အမွဲပွဿနာ ဖွဈရသူပါ။
ဒါကွောငျ့ Lady Bird ဟာ အရှယျရောကျလာတဲ့အခါ တဇှတျတိုး လုပျတတျလာတဲ့၊ ပုနျကနျတတျလာတဲ့ သားသမီးနဲ့ မိဘဖွဈသူကွားမှာ ဖွဈတတျတဲ့ ကတောကျကဆ ဆကျဆံရေးအကွောငျး သဘာဝကကြ၊ လကျတှကေ့ကြ ရိုကျကူးထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ မိဘနဲ့ သားသမီးဆကျဆံရေးကို ပိုမို နားလညျနိုငျစမေယျ့ Lady Bird ဟာ မိဘတှေ ကွညျ့သငျ့တဲ့ ဇာတျကားကောငျးဖွဈပါတယျ။
ဒါလေးကတော့ အကောငျးဆုံးအနျနီမေးရှငျးရုပျရှငျဆု၊ အကောငျးဆုံးဇာတျဝငျတေးဆု နဲ့ အခွားဆုပေါငျးမြားစှာရခဲ့တဲ့ စိတျကူးယဉျအနျနီမေးရှငျး ဇာတျလမျးအမြိုးအစား ဖွဈပါတယျ။ ဇာတျအိမျအကဉျြးကတော့ မကျဆီကနျ ကလေးငယျမီဂေါဟာ အဆိုဝါသနာပါတဲ့ ကလေးပါ။ ဒါပမေဲ့ ထူးဆနျးတာကတော့ မီဂေါရဲ့ အဘှားကစလို့ သူ့မိဘတှအေထိ သီခငျြးဂီတကို ခါးခါးသီးသီး မုနျးတီးပွီး လုံးဝမဆိုရ၊ နားမထောငျရလို့ ပိတျပငျထားကွပါတယျ။ ဒီလို ဝါသနာနဲ့ အိမျမကျကို ရိုကျခြိုးခံရတာကွောငျ့ ကွကှေဲနတေဲ့ မီဂေါဟာ အကွောငျးတဈခုကွောငျ့ မတျောတဆ ဝိဉာဉျတှနေတေဲ့ တမလှနျကမ်ဘာကို ရောကျသှားခဲ့ပါတယျ။
တမလှနျကမ်ဘာမှာ သဆေုံးသှားတဲ့ မီဂေါတို့ ဘိုးဘေးတှေ အားလုံးကို တှရေ့သလို အရမျးပြျောပြျောနတေတျတဲ့ ဟကျတာ ဆိုတဲ့ ဂီတကြှမျးကငျြသူနဲ့ သူငယျခငျြးဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။
ပြျောစရာကောငျးတဲ့ ဝိဉာဉျမွို့တျောကွီးမှာ မီဂေါတဈယောကျ သူဖွဈခငျြတဲ့ အဆိုတျောအိမျမကျကို အကောငျထညျဖျောဖို့ ကွိုးစားရငျး သူ့မိသားစုရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြနဲ့ ပြောကျကှယျနခေဲ့တဲ့ အမှနျတရားတဈခုကို ရှာဖှတှေရှေိ့သှားတဲ့အခါ…..မီဂေါတဈယောကျလညျး ဝိဉာဉျလောကမှာ ဆကျနရေငျ ထာဝရပြောကျကှယျသှားမယျဆိုတာကို သိလိုကျရတဲ့အခါ…
ကာတှနျးကားဆိုပမေဲ့ တကယျ့မကျဆီကနျရိုးရာအလှတှေ၊ ယဉျကြေးမှုတှကေို ထညျ့သှငျးတငျဆကျထားတာမို့ ကွညျ့ရတာ အတျောလေး အရသာရှိပါတယျ။ ကာတှနျးကားဆိုလို့ အထငျမသေးနဲ့။ ကလေးတငျမဟုတျဘူး အကျဒျမငျတို့ လူကွီးတှပေါ မကျြရညျကဝြမျးနညျးရတဲ့အထိ အပီအပွငျ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ရုပျရှငျကားပါနျော။
ဒါကတော့ သမိုငျးအမှနျကို ရိုကျကူးထားတဲ့ သညျးထိတျရငျဖို/ ဒရမျမာ ဇာတျကားပါ။ IMDB 7.9 အထိ ရထားတဲ့ Dunkirk ဟာ ဒုတိယကမ်ဘာစဈမှာ ပိတျမိနတေဲ့ မဟာမိတျတပျသားတှကေို စှနျ့စှနျ့စားစားကယျထုတျတဲ့ စဈဆငျရေး အကွောငျးကို ရိုကျထားတာပါ။
ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ၁၉၄၀ မှာ နာဇီဂြာမနီတှကေ ပွငျသဈကိုရုတျတရကျ ကြူးကြျောလိုကျတာကွောငျ့ မဟာမိတျ တပျသားလေးသိနျးဟာ Dunkirk ဆိုတဲ့ ရှာလေးရဲ့ ကမျးခွနေဲ့ သဘောင်္ဆိပျကမျးတှမှော ပုနျးနခေဲ့ရပါတယျ။ ဒီလို ပုနျးနရေပွီး ထှကျပွေးလှတျမွောကျနိုငျဖို့ လမျးစ သိပျမရှိတဲ့ မဟာမိတျတပျသားတှကေို နောကျဆုံးမှာ အောငျအောငျမွငျမွငျ ခကျခကျခဲခဲ ဘယျလို ကယျထုတျသှားကွလဲဆိုတာ ရှုစားကွပါလို့….
စဈကားတှေ ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ သူတှအေတှကျတော့ အတျောလေး အဓိပ်ပါယျရှိတဲ့ ရုပျရှငျကားကောငျးပါပဲ။ အဲ့ရုပျရှငျမှာ အကျဒျမငျအကွိုကျဆုံးစာသားကတော့ “လူလေးသိနျးဟာ အိမျမပွနျနိုငျတော့တဲ့အခါ အိမျဟာ သူတို့ဆီရောကျလာခဲ့ပါတယျ”တဲ့။ ဒီရုပျရှငျဟာလညျး အကယျဒမီဆုမြားစှာ သိမျးပိုကျခဲ့ပါတယျ။
ဒါကတော့ IMDB 7.9 အထိရထားတဲ့ LGBT ဇာတျကားလေး ဖွဈပွီး မူရငျးဝတ်ထုကော ရုပျရှငျအဖွဈ ပွနျအသကျသှငျးတဲ့အခါမှာကော အောငျမွငျမှုရခဲ့တဲ့ ဇာတျကားလေးပါ။
အခြိနျကာလကတော့ ၁၉၈၃ ရဲ့ နှရောသီတဈခု ဖွဈပွီး ဆယျကြျောသကျကောငျလေး Elio ဟာ အီတီလီက Lombardy ဒသေမှာ သူ့မိသားစုနဲ့ အပနျးဖွနေပေါတယျ။ တဈရကျမှာတော့ Elio တို့ အဖဆေီမှာ အလုပျသငျလုပျဖို့ ဆိုပွီး Oliver ဆိုတဲ့ Ph.D ကြောငျးသားတဈယောကျ ရောကျလာခဲ့ပါတယျ။ Oliver နဲ့ Elio တို့ရဲ့ တှဆေုံ့မှု၊ ခငျမငျရငျးနှီးမှုကနေ ပေါကျဖှားလာတဲ့ သံယောဇဉျဟာ နောကျဆုံးမှာတော့ သာမနျလူတှလေကျခံဖို့ ခကျခဲတဲ့ သူတို့ရဲ့ စိတျဆန်ဒအာသီသကို နှိုးထလာစခေဲ့ပွီး Elio နဲ့ Oliver တို့ရဲ့ဘဝကို လုံးဝပွောငျးလဲသှားစခေဲ့ပါတယျ။
သိပျကို ကွညျနူးစရာကောငျးတဲ့ အီတလီရဲ့ အလှတှကေို နောကျခံထားပွီး အဓိကမငျးသားနှဈယောကျရဲ့ ပွငျးပွတဲ့ သရုပျဆောငျခကျြတှကွေောငျ့ ကွညျ့ရှုသူ ရငျထဲ နှေးထှေးသှားစမေယျ့၊ ပိုပွီး လူသားဆနျလာတတျစမေယျ့၊ အခဈြကို အခဈြလို့သာ အပွဈကငျးကငျး မွငျတတျလာစမေယျ့ Gay ဇာတျကားကောငျး တဈခုဖွဈပါတယျ။
Related Article >>> ‘မသိဘူး ရိုမယျ’ ဆိုတဲ့ယောငျးတို့အတှကျ အရိုဆုံးရုပျရှငျကား (၂) ကား
IMDB 8.2 အထိ ရထားပွီး မှုခငျးရုပျရှငျ/ဒရာမာ အမြိုးအစားဖွဈပါတယျ။ ဇာတျအိမျအကဉျြးကတော့ Mildred Hayes ဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးဟာ မုဒိနျးကငျြ့ပွီး သတျခံလိုကျရတဲ့ သူ(မ) သမီးအတှကျ တရားမြှတမှုကို ရှာဖှဖေို့ ကွိုးစားနသေူပါ။ ဒါပမေဲ့ အားမစိုကျထုတျလိုတဲ့ Ebbing မွို့က ရဲတှနေဲ့ အာဏာပိုငျတှကေတော့ ဒီအမှုကို လဈြလြူရှုနခေဲ့ပါတယျ။ သူတို့ပဲလား ဆိုတော့ မဟုတျပါဘူး၊ မိခငျသောကကို ကိုယျခငျြးမစာတဲ့ မွို့ခံပွညျသူတှကေလညျး ဒီအမှုမှာ အာဏာပိုငျတှနေဲ့ တဈသားတညျးရပျနခေဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ(မ)ဟာ လှယျလှယျနဲ့ လကျလြှော့တတျသူ မဟုတျပါဘူး။
(၇)လလုံးလုံး တရားခံကို ဖမျးဆီးမှု မလုပျတဲ့အခါမှာတော့ သမီးဖွဈသူအတှကျ အမှနျတရားနဲ့ တရားမြှတမှုကို ရဖို့စိတျပိုငျးဖွတျထားတဲ့ Mildred Hayes တဈယောကျ သူ့နညျးသူ့ဟနျနဲ့ အပီအပွငျ ကွိုးစားလာခဲ့ပါတော့တယျ။
ဒါတှကေတော့ အကယျဒမီဆုနဲ့ ရှကေမ်ဘာလုံးဆုတှေ သိမျးပိုကျနိုငျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ရဲ့ ဇာတျကားကောငျးပါပဲ။ ဒီထဲမှာ ယောငျးတိုဘယျကားလေးတှေ ကွညျ့ပွီးပွီလဲ?
References: vanityfair, imdb
Tags: 2018, best, drama, for, Fun, Movie, oscar, review, Thriller, winning
ဆေးရခက်တဲ့ beauty sponge နဲ့ brush တွေကို အသစ်လေးအတိုင်း ဖြူဖွေးသွားစေဖို့
Aye Mon Kyaw December 27, 2018